कति छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर ? (सूचीसहित) - ramechhapkhabar.com
कति छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर ? (सूचीसहित)
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य ११९.४४ रुपैयाँ र खरिद दर ११८.८४ रुपैयाँ तोकेको छ । यसैगरी यूरोको बिक्री मूल्य १३७.८३ रुपैयाँ र खरिद मूल्य १३७.१४ रुपैयाँ कायम हुँदा पाउण्ड स्र्टलिङको बिक्री मूल्य १६०.५० रुपैयाँ र खरिद मूल्य १५९.६९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
बिक्री दर ८८.२४ रुपैयाँ कायम भएको सिंगापुर डलरको खरिद दर ८७.६२ रुपैयाँ कायम छ भने १० जापानी ऐनको बिक्री मूल्य १०.४९ रुपैयाँ हुँदा १०.४४ रुपैयाँ खरिद मूल्य छ । चिनियाँ युवानको बिक्री मूल्य १८.६५, खरिद मूल्य १८.५६ र साउदी रियालको बिक्री मूल्य ३१.८४ र खरिद मूल्य ३१.९८ रुपैयाँ तोकिएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, कतारी रियालको बिक्री मूल्य ३२.६६ रुपैयाँ र खरिद मूल्य ३२.४९ रुपैयाँ तोकिँदा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दिरामको बिक्री मूल्य ३२.५२३ रुपैयाँ र खरिद मूल्य ३२.३५ रुपैयाँ कायम भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।